Dhakhaatiir Baadhay In Uu Madaxwayne Trump Maskax Ahaan Caafimaad Qabo Iyo Natiijado Kasoo Baxday Oo Shaaciyeen
Saturday, 13 January 2018 08:48
13/1/2017 (BNN) Dhakhtarka gaarka ah ee aqalka cad ee looga arrimayo dalka mareykanka ayaa sheegay in madaxwayne Donald Trump uu caafimaadkiisu yahay mid wanaagsan.
Dhakhtarkan ayaa baadhitaankii caafimaad ee ugu horreeyay ku sameeyay madaxwaynaha.
Ronny Jackson,oo fuliyay baardhitaan qaatay saddex saacadood ayaa bayaan kooban oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in baaritaanada ay si wanaagsan u dhaceen.
Baaritaanka caafimaad ee lagu sameeyay madaxwayne Donald Trump ayaa ka dambeeyay ka dib markii dhowr jeer su'aalo laga keenay caafimaadkiisa dhanka maskaxda.Buug dhawaan la soo bandhigay ayaa waxa lagu sheegay in maskaxiyan uusan madaxwayne Trump fiyoobeen.
Buugga waxaa diyaariyay Steve Bannon, oo ahaan jiray kaaliyihii istiraatiijiyadda Aqalka Cad, wuxuuna qeexayaa sidoo kale in "la kullankii koox Ruushka ka socotay oo wiilka Trump uu fadhiyay" uu ahaa "khiyaano".
More in this category: « DAAWO Madaxwayne Trump Oo Madowga Caalamku Ku Kaceen Kadib Markii Uu Cunsuriyeeyay Midowga Afrika Oo Ka Dalbaday Raaligalin Iyo Warbaahinta Oo Dhulka Jiiday+VIDEO Nuxurka Kulan Dhex Maray Madaxweyne Muuse Biixi Iyo Waftigii Dawlada Imaraadku u soo Dirtey + Qodobo Lagu Daraayo Heshiiskii Saldhiga +[Akhriso] »